Global Voices teny Malagasy » Notànana tao amin’ny seranam-piaramanidin’i Islamabad ilay Pashtun mpiaro ny zon’olombelona ary navotsotra taorian’ny faneren’ny media sosialy · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 26 Oktobra 2018 14:08 GMT 1	 · Mpanoratra Qurratulain (Annie) Zaman Nandika Liva Andriamanantena
Sokajy: Azia Atsimo, Pakistana, Ady & Fifandirana, Fahalalahàna miteny, Fitantanam-pitondrana, Hafanàm-po nomerika, Mediam-bahoaka, Politika, Zon'olombelona
Nosamborina tao amin'ny seranam-piaramanidin'i Islamabad tamin'ny 12 Oktobra i Gulalai Ismail , ilay Pashtun mpikatroka mpiaro ny zon'olombelona sady mpanorina ny tambajotra Seeds of Peace [Voam-pandriampahalemana], raha iny izy tonga tamin'ny fiaramanidina avy any Londra iny.
Raha vao tonga izy dia nosamborin'ny Sampan-draharaha Federaly Misahana ny Fanadihadiana  (FIA) ary nohadihadiana nandritra ny adiny valo. Nolazaina izy fa ao amin'ny Lisitry ny Fanaraha-maso eo am-pivoahana izay mametra azy tsy handeha any ivelany ny anarany.
Navotsotra  tamin'io andro io ihany izy, taorian'ny fanerena goavana tao amin'ny tambajotra sosialy avy amin'ireo antoko liam-pandrosoana, ny fikambanana feminista sy ny vondrona hafa.
Vondrom-poko vitsy an'isa izay mipetraka any Pakistana sy Afghanistan ny ankamaroany ny Pashtuns . Mitohy ny fandrahonana ny Pashtuns amin'ny fanavakavahana sy ny herisetra ary nafindra toerana noho ny fifandonana teo amin'ny tafika sy ny mpitolona mitam-piadiana Taliban ny dimy hetsy tamin'izy ireo. Tamin'ny taona 2016, nomena alalana ofisialy hiverina any amin'ny taniny any amin'ireo Faritra Federaly Tantanan'ny Vondrom-poko ao Pakistana ny Pashtuns, saingy nanakana ny maro tamin'ny fiverenana azo antoka ny fvanja milevina naparitaka tao an-toerana .
Ny Hetsika Pashtun Tahafuz (Fiarovana)  , hafohezina amin'ny anarana hoe PTM dia lasa sehatra hfivorian'ny olona an'arivony mba hilazana momba ireo tsy rariny ireo. Mpikambana mavitrika ao amin'ny hetsika i Gulalai .
Nisioka i Rafiullah Kakar , mpanolo-tsaim-bahoaka amin'ny politika Pashtun hoe:
Hoy izy tao amin'ny fanambaràny  :
Raha mbola notazonina tao amin'ny seranam-piaramanidina izy dia namoaka fanambarana  ny Amnesty International izay nilaza fa tokony hamoaka avy hatrany tsy misy fepetra an'i Gulalai Ismail i Pakistana .
Namoaka hafatra ho firaisankina amin'i Gulalai ihany koa ny Fikambanan'ny Vehivavy Demaokratika  izay fikambanam-behivavy mpanao politika feminista elatra ankavia Pakistaney .
Nisioka i Bushra Gohar , mpikambana ao amin'ny Antenimieram-Pirenena teo aloha sady filoha lefitry ny Antoko nasionaly Awami hoe:
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2018/10/26/127963/
 Sampan-draharaha Federaly Misahana ny Fanadihadiana: https://en.wikipedia.org/wiki/Federal_Investigation_Agency
 fvanja milevina naparitaka tao an-toerana: https://reliefweb.int/report/pakistan/displaced-pashtuns-return-find-homes-teeming-landmines
 Hetsika Pashtun Tahafuz (Fiarovana): https://www.thenews.com.pk/print/287729-the-protest-of-the-pashtun
 Mitaky ny Rariny ny Diabe Lavitra Nataon'ny Pashtun Taorian'ny Taona Maro Nanenjehana ny Foko: https://globalvoices.org/2018/02/10/the-pashtun-long-march-asks-for-justice-after-years-of-ethnic-targeting/
 namoaka fanambarana: https://www.amnesty.org/en/latest/news/2018/10/pakistan-release-pashtun-human-rights-defender-immediately-and-unconditionally/
 Bushra Gohar: https://twitter.com/BushraGohar